Akhri: RW Cabdiweli iyo Prof. Jawaari oo isku raacay dib u-eegista shir uu furay madaxweyne Xasan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: R/wasaaraha Soomaaliya ayaa xubnaha xukuumadda ee u xilsaaran dhismaha maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan Baydhabo ugu yeeray iney manta oo ah 2-da November wadatashi ugu soo laabtaan Muqdisho.
Qoraal kasoo baxay xafiiska R/wasaare C/weli Sheekh Axmed ayaa lagu sheegay iney jiraan arrimo u baahan wadatashi oo ku saabsan shirka ka socda magaalada Baydhabo ee lagu dhisayo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Wuxuu sheegay R/wasaare iney jireen mabaadii’ ay aheyd in la raaco oo ay ka mid aheyd: In loo dhan yahay maamulada la sameynayo, in xukuumaddu horsed u noqoto iyo inuu jiro jawi nabad iyo xasilooni oo howlahaas lagu fulin karo.
Haddaba R/wasaaraha ayaa faray xubnaha xukuumadda iney Muqdisho ugu soo laabtaan wadatashi, in laga hortago wax kasta oo carqaladeyn kara amaanka Baydhabo iyo in inta wadatashigu socdo aan loo gudbi Karin arrimaha dhameystirka dastuurka iyo arrimaha doorashada, balse shirku sii socon karo.
Qorshahaas uu wato R/wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed waxaa taageeray Ku simaha Madaxweynaha Dalka ahna Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Jawaari ayaa sheegay inuu taageerayo in la ballaariyo dadaallada ku aadan in loo wada dhamaado gogosha shirka ergada dhisidda maamul sameynta gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka soconeysa magaalada Baydhaba ee xarunta gobolka Baay.
“Waxaan hor iyo horaan doonayaa in aan halkaan ka ayido aniga oo ku hadlaya magaceyga, magaca Madaxweynaha Jamhuuriyadda go’aannada kasoo baxay Ra’isulwasaaraha Xukuumadda ee lagu xoojinayo dadaallada is fahamka iyo wada hadalka ah ee ka socda magaalada Baydhabo si ugu dambeyn loo helo in shirka ergada ee ka socda magaalada Baydhabo uu u noqdo mid loo wada dhanyahay oo dhammaan shacabka Koonfur Galbeed ay ka wada qeybgalaan” ayu yiri Jawaari.
“Waxaan rabaa inaan xusuusiyo dhammaan ergooyinka, wasiirrada howsha wada, siyaasiyiinta, guddiga farsamada iyo guud ahaanba shacabka Koonfur Galbeed markii howlahan oo kale la qabanayo habraaca ayaa ka muhiimsan natiijada soo baxda waana muhiim in habraaca loo marayo howsha dhameystirka dhismaha maamulka Koonfur Galbeed inuu noqdo mid loo wada dhan yahay si loo helo oo uu u sameysmo maamul lagu diirsado, loo wada dhan yahay islamarkaana lagu qanac sanyahay sida uu madasha furitaanka ka sheegay Madaxweynaha Jamhuuriyadda in dhinacyada gogoshaasi ka maqan oo ay Odayaasha ugu horeeyaan laga wada qeybgeliyo”ayuu hadalkiisa sii raaciyey Ku simaha Madaxweynaha Dalka.
Shirka maamul u sameynta Koonfur Galbeed oo uu furay madaxweyne Xasan Sheekh, uuna garab taagnaa gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa waxaa diidan qaar ka mid ah siyaasiyiinta Baay iyo Bakool, sida garabka uu hogaamiyo Madoobe Nuunow.
Ma cadda in qorlaaka kazoo baxay R/wasaare C/weli, islamarkaana uu taageeray Prof. Jawaari uu qeyb ka yahay khilaafka u dhaxeeya madaxda dowladda Soomaaliya, waxaana go’aankaan soo baxay xilli uu dalk ka maqan yahay madaxweyne Xasan Sheekh oo shirkaas Baydhabo u tagey inuu daah-furo.